Waxaad jeceshahay App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay ?
Farriimaha qoraalka ah si fudud loo online karaa adigoo exactspy. Waxaa jira Chine badan software free heli karaa online, laakiin waxaad u Malayn in ay sida ugu fiican ee kuwa shaqo lacag? Sida xaqiiqada ah ma. Sababtuna waxay tahay, waxaa laga yaabaa in aad ka heli track buuxa ee fariimaha qoraalka ah, laakiin waa wax aan macquul aheyn in ay helaan wax kasta oo ka yar hal xirmo.
Waa arrin aad u sahlan loo akhriyi karo fariimaha ee qof ee telefoonka mobile marayo exactspy-App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay. Hadday tahay in aad shaqaale ee shirkadda, xaaskiisa, GF, BF, ninkaaga, doone ama dhallinyaro ah, aad adeegyada ay ka heli karaan exactspy-App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay. Waa software lagu kalsoonaan karo oo aad loo marayo taas oo ka heli kartaa in la ogaado wax iyo wax kasta oo la xidhiidha in ay qalab mobile, taas oo aad rabto in aad soo basaasaan.
Waxaad ku rakibi karaa software si ay u qalab iyo dhammaan updates ka heli meesha fog laga. Waxa uu noqdo lagama maarmaan dhab ah oo loogu talagalay dadka qaar si aad u hesho qoraallada la soo wareejiyo oo mobile ah oo ka soo kasta oo. Hadday tahay kiiska ee u diraya ama qaata qoraalka, waxaad ku heli kartaa macluumaad oo dhan ku dhex exactspy-App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay hab aad dooneysid. Waxaa ka baxo dhibic dilemmatic ka soo noloshaada iyo aad noqon kartaa lagu dhammeeyaa oo ku saabsan wax kasta oo dhacaya kugu xeeran. Waxaa jira macaamiil badan, kuwaas oo lagu helay in ka faa'iidaysteen exactspy ay sabab u tahay saaxiibtimo user, macaamiisha, iyo adeegyada ugu sarreeya iyo wax kasta ka sarreeya, Adeegyada dhab ah ganaax. Waxaad isku dayi kartaa xirmo iyo haddii ay adiga kugu habboon, aad sidoo kale ka heli kartaa adeegyo kale. Waxaad ka arki kartaa dhammaan qalabka, marka laga reebo kaliya Fariin adeegyada. exactspy jiro aad u baahantahay oo dhan oo aad isku haleen karo wax walba oo la xiriira basaasnimo mobile.
Sida loo GPS qof track iyaga oo aan ogayn
Xaaladda ku joogo, dadku u isticmaalaan Chine badan, sida WhatsApp, Skype, Viber oo Chine software kale ee wada hadalka. Si kastaba ha ahaatee, Dalka Chine oo lacag la'aan ah ma siin track codsiyada software sida. Waxaad u baahan tahay version lagu bixiyay la mid ah iyo haddii aad ku rakibi exactspy-App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay, waxaad ka heli doontaa faahfaahin kasta oo laga helay ilo kala duwan ee qoraalka kala iibsiga.
Iyadoo exactspy-App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay waxaad awoodi doontaa inaad si:
Waxaad Download karaa: Waxaad jeceshahay App raadka Qof iyaga oo aan ogyahay ?
Android app to track another phone without them knowing, App raadka uu qof iyaga oo aan ogayn, Apps to track people without them knowing, How can i track someone without them knowing, Sida loo GPS qof track iyaga oo aan ogayn, How to track someone phone without them knowing for free, Is there an app to track someones phone without them knowing
← Waxaad Hack karaa An farriimaha qoraalka ah iPhone Iyadoo ExxactSpy ?
→ Waxaad jeceshahay App Wixii Reading Someones farriimaha qoraalka ah ?